: at 9/08/2010 04:42:00 PM
ကြောက်ပါတယ် ကျောက်ရယ် ....
ကလင် .. ကလင် .. ကလင် ....
“ အစ်မရေ .. သမီး ဗိုက်အောင့် နေပြန်ပြီ၊ ဗိုက်လည်းကယ်တယ် ၊ တညလုံး မအိပ်နိူင်ဘူး ။ လုပ်ပါအုံး ။ ”
ဖုန်းသံကြောင့် စောစောစီးစီး လန့် နိုး လာရာမှ နာကျင်မောဟိုက်စွာ ဆက် ပြော သံများကြောင့် စိတ်ပူသွားမိသည် ။ ဒီကလေးမ တော့ မနေ့ ညက ဘာတွေ ဘယ်လောက်တောင် များ အစားသောင်းကျန်းခဲ့ပြန်ပြီလည်းဟူသော အတွေးက ချက်ချင်း ခေါင်းထဲ ရောက်လာဖြစ်သည် ။
“ ဟဲ့ ။ ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလည်း ။ ဗိုက် ရဲ့ ဘယ်နေရာ မှာ အောင့်တာ လည်း ၊”လို့ပြန်မေးကြည့် လိုက်သည် ၊ ဝမ်းဗိုက် အပေါ်ပိုင်းညာဘက် အခြမ်း ဆိုတော့ အသည်း များ ပြန်ယောင်တာလား လို့ ထင်လိုက်မိသည် ။ အန်သလား ။ ဝမ်းလျှော သလား ၊ချမ်းတုန် ဖျားသလား ။ ဆီးရောင် ဝါသလား ၊ နီသလား ။ ဆီးပူ ဆီးကျင် သလား ။ အစရှိသဖြင့် လားပေါင်းများစွာသော မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးဖြစ်သည် ။ သူက ငယ်ငယ်တည်းက ချူချာပေမဲ့ ခပ်ပေပေတေတေ နေတတ်သူမို့ ၊ ပြောစကား နားမထောင်တတ်သူမို့တခါတရံ သနားစိတ်၊ တခါတရံ ဂရုဏာဒေါသော စိတ်ဖြင့် ခင်တွယ် ဆက်ဆံနေခဲ့မိသူ ညီမငယ်လေး တစ်ယောက်ပါပေ ။ သည် နှစ် ဆန်းပိုင်းတည်းက မကြာခန ဗိုက်အောင့်နေတတ်သည် ။ ရင်ခေါင်းတောင့်သည် ။ ပျို့ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစားအသောက် ပျက်ခြင်းတော့ မရှိ ၊ သင်္ကြန်မတိုင်မီက အစာအိမ်ယောင် ၊အသည်းယောင် အသားဝါ သည် ဆိုပြီး ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသေးသည် ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန် ပြောစကား နားမထောင် ပဲ ဆေးရုံ ဆင်းလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အစားမရှောင် ၊ အချဉ် အစပ်၊ အဆီ အကြော် ၊ အကင် များ ကြိုက်သလို စားသည် ။ ခုတလော သူမ ပိုပြီး ချူချာ နေသည် ။ အသည်း ဘက် နေရာ မှာ မကြာခဏ အောင့်တတ်သည် ။ နောက်ပိုင်းတွင် ရက်ဆက် နာလာသည် ။ လူက ခပ်ပိန်ပိန်ဆိုတော့ သည်းခြေကျောက်တည်တာ ။ ယောင်တာ တော့ သိပ်မဖြစ်လောက်ပါဘူး ဟု ထင်နေမိသည် ။ ဒီတော့ နာလာရင် အစာအိမ်ဆေး ( Antacid ) နဲ့ အနာ ပျောက်ဆေး ( Antispasmotic ,Anticholinergic ) တို့ ကို သောက်စေပြီး အလွန် နာလာလျှင်တော့ ထိုးဆေး ပြောင်းပေးရသည် ။
ဒီလို နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်ကျော် တရက်မှာ နာကျင်လွန်းလို့ဆေးရုံထပ်သွားရသည် ။ ဆေးရုံ တက်ရမှာ ကြောက်သော သူ့ ကို ဘယ်လိုမှ ပြောမရသည့် အဆုံး ထိုးဆေး ၊သောက်ဆေးများ ဖြင့် အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ နောက်ရက်များမှာ မှ ဓါတ်မှန်ရိုက်၊ ultrasound ရိုက် ခြင်းဖြင့် သည်းခြေကျောက် ကို ရှာတွေ့ ခဲ့လေသည် ။ ပထမ အကြိမ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် ultrasound ရိုက်စဉ်က အသည်း အနည်းငယ် ကြီးနေရုံမှ လွဲ၍ ဘာကျောက် မှ မတွေ့ ပဲ ၊ ဓါတ်မှန် ချပ်ထဲတွင် မှ ကျောက်တုံး ပုံရိပ်များ တွေ့ ရသဖြင့်၊ တစ်ပါတ် မျှအကြာမှာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံကြီးတရုံတွင် နောက်တကြိမ် ultrasound ထပ်ရိုက်ကြည့် ရသည် ၊ ထိုအခါကျမှ multiple gallstones ဟု အဖြေရလေသည် ။ ဒီတော့လည်း နာ၊ န၊ီ ဝါ ဆိုသည့် လက်သုံးစကား အရ ခွဲ စိတ် ကုသ ဖို့အကြံ ပေးလေသည် ။ ( နာ၊ နီ၊ ဝါ ဆို သည် မှာ သည်းခြေကျောက်တည်နေသူများတွင် Pain ,Infection & Inflammation , Jaundice စသည့် အချက်များ ရှိပါက ခွဲစိတ်ကုသ ဖို့ လိုအပ်သည့် အခြေအနေပင်ဖြစ်လေသည် ။ ဤသည်မှာ ခွဲစိတ်ပါမောက္ခ ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်လေး သင်ကြားပေးခဲ့သော အတိုကောက် အသုံးအနှုန်း များဖြစ်ပါသည် ) ။
ထိုအခါတွင်မတော့ ခွဲစိတ်ဖို့မပြောနဲ့ ဆေးရုံ တက်ရမှာ ကိုပင် ကြောက်လှသော ချစ် ညီမငယ်လေး တယောက် မျက်နှာငယ်စွာဖြင့် သနားစဖွယ်အသွင် ရှိနေလေတော့သည် ။ ထို အချိန်မှာ ပဲ ကြေးမုံသတင်းစာ တွင် ကြော်ငြာစာလေး တခုကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တွေ့ မိသည် ။ သည်းခြေကျောက်ကို မခွဲ မစိတ်ရပဲ သက်သာပျောက်ကင်းသွားသူ ဦးသန်းဝင်း ၏ ကုသိုလ်ဖြစ် ကြော်ငြာချက်လေး ဖြစ်ပါသည် ။ ( များမကြာမီ အချိန် ကလည်း မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် ထဲ့သွင်းရေးသား ခဲ့ဖူးသည် ဆိုတာ နောက်မှ သိရသည် ။အောက်တွင် ဦးသန်းဝင်းကိုယ်တိုင် ဘာသာပြန်ရေးသား ချက်များကို ဖေါ်ပြထားပါသည် ။ မူလ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသူ Dr . Lai Chiu-Nan ၏ မှတ်တမ်းများ ကို ဤ နေရာများ....(၁) နှင့် (၂)..တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် )
ကျောက်တည်ခြင်းမှ သဘာဝနည်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေခြင်းအကြောင်းကို မပြောမီ ၊ သည်းခြေကျောက် အကြောင်း ပြောချင်ပါသည် ။
ကျောက် ဆိုတာ ဘာလည်း ၊ ဘာကျောက်မို့ကြောက်တာလည်း ။
ကျောက် တော့ ကျောက်ပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဇော်ဝမ်းရဲ့ လမ်းခင်းတဲ့ ကျောက်ခဲ မဟုတ် ။ “ ရတနာစိန်ကျောက် ဇယ်တောက်တမ်းကစားရအောင်” ဆိုတဲ့ ကနွဲ့ ကရ မင်းသမီးလေး ရဲ့ကြော်ငြာ ထဲကလို တန်ဘိုးကြီး လှပသော၊လူတွေသည်းခြေခိုက်အောင် ကြိုက်ကြသော အဖိုးတန် ကျောက်များလည်း မဟုတ် ။ လင်ဆာဘကျောက် လို ဘူမိကျောက်များလည်း မဟုတ် ။ ဒီကျောက်တွေက သည်းခြေခိုက်အောင် နာကျင်စေတတ်သော သည်းခြေကျောက် ( Gallstones /Choleliths) များသာ ဖြစ်ပေသည် ။ ဆိုဒ် စုံ ၊ ဂိုက်စုံ ၊ ပုံစံစုံလှသော ဒီကျောက်များ ၊ တစ်ချို့ မှာ တစ်လုံးတည်း ၊ တစ်ချို့ မှာ အလုံးပေါင်းများစွာ အနေအထားဖြင့် သည်းခြေအိတ်ထဲတွင် တည်ရှိနေတတ်သည် ။ အရွယ် အမျိုးမျိုး ၊အမှုန် အစေ့ငယ်များအရွယ်မှ တစ်ချို့ မှာ ဂေါက်သီးလုံး မျှ ပင်ကြီးမားသည်ဟု ဆိုကြသည် ။ကင်ဆာရောဂါနှင့် ကျောက်တည်မှုများ ဆက်စပ်နေခြင်းကို ကင်ဆာ သုတေသီများ တွေ့ ရှိထားသဖြင့် ကျောက်တည်မှု သည်လည်း ကြောက်ချင်စရာကြီးလို ဖြစ်နေပါသည် ။
ဒီကျောက်တွေမှာ ကိုလက်စထရောကျောက်( Cholesterol Stone ) ၊ အရောင်ကျောက်( Pigment Stone) ဟူ၍ အဓိက ၂ မျိုး၂စားရှိပြီး အရော အနှော ကျောက် ( Mixed Stone ) တွေလည်း ရှိနေတတ်သည် ။ သည်းခြေရည်တွင် သည်းခြေဆား ( bile salt) ၊ ကိုလက်စထရော ( cholesterol)နှင့် လက်စီသင်( lecithin) ဓါတ်များ ပါဝင်သည် ။ ထို သည်းခြေရည်များ ပြစ်ခဲမှု များလာပါက ကျောက်တည်ခြင်း ဖြစ်စေတတ်သည် ။
Cholesterol Stone မှာ သည်းခြေကျောက်များတွင် အများဆုံး တွေ့ ရသော အမျိုးအစားပင်ဖြစ်ပြီး ၇၀ မှ ၈၀ % ထိ ရှိတတ်သည် ။ အများအားဖြင့် အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိပြီး ဖြူဝါရောင်များလည်း ဖြစ်နေတတ်သည် ။သည်းခြေရည်တွင် ကိုလက်စထရောဓါတ်များရာမှ ထိုကျောက်များဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းပါပေ ။ ( သွေးရည်ကြည်ထဲတွင် ကိုလက်စထရော များသူတိုင်း သည်းခြေကျောက်တည်တတ်သည် လို့တော့ မဆိုလိုပါ ) ။
Pigment Stone ကတော့ ၂၀ % မျှ ရှိပြီး အရောင်မှာ မဲနက်သည် ။ သူ့ ထဲတွင် bilirubin ဟုခေါ်သော သွေးနီဥကွဲပျက်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဘီလီရူဘင် အဝါဓါတ်များ ၊ ကယ်လ်စီယံဆားဓါတ်များ ပါဝင်သည် ။
ထို့အပြင် အတုအယောင်ကျောက် ( Pseudolith or fake stone ) ဆိုတာလည်း ရှိသေးသည် ဆိုပဲ ။ လူတွေမှာသာ အတုအယောင် လုပ်တတ်ခြင်း မဟုတ် ။ ကျောက်တွေလည်း တုတတ်သေးသည် ။ ဒါတွေကတော့ ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ အသွင် မရောက်သေး မဖြစ်သေး ၊ sludge အမှုန်ခပ်ပြစ်ပြစ် အဆင့်သာ ရှိသေးသည်ပေါ့ ။
ဒီကျောက်တွေ ဘယ်လိုဖြစ် ။ ဘယ်သူတွေမှာ ပိုဖြစ် ။
တချို့ က အမျိုးလိုက်သည် ။ တချို့ က ခန္ဓာကိုယ်ဓါတုဓါတ်များအပေါ်တည်သည် ။ ကိုယ် အလေးချိန်ပေါ် တည်သည် ။ အစားအသောက်(ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ကစီဓါတ်များသော အစားအစာ)၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း ၊ အလေ့အထအပေါ် တည်သည် ။ ဟော်မုန်းဓါတ် များပြားမှုသုံးစွဲရမှုပေါ် တည်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု ပေါ်တွင်တည်သည် ။ ကျောက်အဖြစ်များရခြင်း အကြောင်း ကို4F - Fat , Female , Fertile , Forty ဟူ၍ အမှတ်ရ လွယ်အောင် ဆိုကြသည် ။ ( သို့ပေမဲ့လည်း ၄၀ ဝန်းကျင် ကိုယ်ဝန်သည် မိန်းမ ဝဝ ကြီး ကို တွေ့ တိုင်း သူ့ တွင် သည်းခြေကျောက်ရှိလား ဟူ၍ သွားမမေးမိပါစေနှင့် ၊အဆင်မသင့်လျှင် သင် အရိုက်ခံရနိုင်ပါသည် ...း))) နဂိုရောဂါအခံ ၊ ဆီးချို ၊ အချို့သွေးအားနည်းရောဂါ .. ဥပမာ Sickle cell anemia ၊အသည်းခြောက်ရောဂါ စသဖြင့် ရှိသူများတွင်လည်း သည်းခြေကျောက်တည်မှု ပိုများတတ်သည် ။
ဘယ်လို ခံစားရမလည်း ။
သည်းခြေတွင် ကျောက်တည်သူတိုင်း နာကျင်တတ်သည်တော့ မဟုတ်ပါ ။ တချို့တွင် သည်းခြေကျောက်များ ကာလရှည်စွာ ရှိနေသော်လည်း ဘာမှ ဒုက္ခမပေး၊ မနာမကျင်ဖြင့် တသက်လုံး နေသွားကြရသူများလည်း ရှိပါသည် ။ ကံကောင်းလေစွ ။ ထိုသူများ အတွက် မည်သည့် ကုသမှုမျှ မလိုအပ်ပါ ။
ထိုကျောက် တစ်လုံး သို့မဟုတ် ကျောက်များကြောင့် သည်းခြေအိတ်နှင့် သည်းခြေပြွန်တို့ယောင်ရမ်း ပိတ်ဆို့ ပါက အသည်းနေရာဝန်းကျင် ( ယာဘက်ဝမ်းဗိုက် အပေါ်ပိုင်း ) တွင် ပြင်းထန်စွာ နာကျင်တတ်သည် ။ ဇောချွေးများပြန်သည်ထိ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်နိုင်သည် ။ အသည်းနှင့် သည်းခြေမှာ နီးကပ်စွာရှိနေသဖြင့် အသည်းယောင်ခြင်းနှင့် သည်းခြေယောင်ခြင်းတို့ ကြောင့် နာကျင်သော နေရာမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်သည် ။ တချို့မှာ နာကျင်ခြင်း အပြင် အန်ခြင်း ။ ရင်ခေါင်း တောင့်ခြင်း ၊ ရင်ပြည့် ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ချမ်းတုန်ခြင်း ၊ အဖျားတက်ခြင်း ၊ အသားဝါခြင်း ၊ ဆီးဝါခြင်း ၊ တို့ ရှိသည် ။ သည်းခြေပြွန်မကြီးတွင် ကျောက်ပိတ်ဆို့ နေပါက ရွှံ့ နှစ်ရောင် ဝမ်း ( clay color stool ) သွားတတ်ပြီး အသားအရေ ယားယံတတ်သည် ။
ဘယ်လို ကုသမလည်း ။
ကျောက်ကြောင့် နာပါက ၊ ( မကြာခဏ နာကျင်နေပါက ) အနောက်တိုင်း ဆေးပညာ အရ ခွဲစိပ်ကုသခြင်းကို စဉ်းစားကြလေသည် ။ နာကျင်နေသော အချိန်တို အတွင်း နာကျင်မှု ပျောက်ကင်းစေရန် ဆေးဝါးများ ( သောက်ဆေး ၊ထိုးဆေး များ) ဖြင့်တော့ ဦးစွာ ကုသကြပါသည် ။ အန်နေလျှင် အအန်သက်သာဆေး၊ အဖျားတက် လျှင် အဖျားကျဆေး အပြင် ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေး များ ပေးခြင်း ဖြင့် ရှိသော လက္ခဏာ များကို သက်သာစေရန် ဆေးများပေးကြသည် ။ တချို့ ကလည်း ကျောက်ပျော်ဆေးများ( Ursodeoxycholic acid , Chenodeoxycholic acid စသည်တို့ ) သောက်ရန်ညွှန်းကြသည် ။ ကျောက်ပျော်ဆေးမှာ လပေါင်းများစွာ၊ တချို့ မှာ နှစ်ချီ၍ သောက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် အသုံးနည်းကြသည် ။အဆိုပါ ဆေးကို မသောက်ပဲ ဖြတ်ထားလိုက်ပါက တချို့ လူနာများမှာ ကျောက်ပြန်တည်တတ်သည် ။သို့ ဖြစ်၍ ခွဲစိပ် ကုသခြင်းကို ဦးစားပေး စဉ်းစားကြသည် ။
ခွဲစိတ်ကုသရာတွင် ယခင်က သမားရိုးကျ ခွဲနည်းဖြင့် ယာဘက်ဝမ်းဗိုက်တွင် ၁၀ စင်တီမီတာကျော်သော ဒါးရာရှည်ကြီးဖြင့် ဗိုက်ဖွင့်ကာ ကျောက်ရှိနေသော ၊ ယောင်နေသော သည်းခြေအိတ်ကို ဖြတ်ထုတ်ရသည် ။ တိုးတက်နေသော ဆေးပညာ ကြောင့် ယခုခေတ်တွင်တော့ ၁ စင်တီမီတာမျှသာ ရှိသော အပေါက်ငယ်လေး ၃ ပေါက်ဖြင့် တယ်လီဗီးရှင်းကြည့်သကဲ့သို့ပြွန် ကရိယာ မှ တဆင့် သည်းခြေအိတ် နှင့် ကျောက်ကို ဖြတ်ထုတ် ဖယ်ရှား နိုင်ပြီ ဖြစ်သည် ။ Laparoscopic cholecystectomy ဟုခေါ်သည် ။ ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ပေးပါက မိနစ် ၂၀ မျှ အချိန်အတွင်း အောင်မြင်ပြီးစီးနိူင်သည်မို့ကြောက်မက်ဘွယ်ရာ ခွဲစိတ်မှုမျိုးတော့ မဟုတ်တော့ပါ ။
ခွဲစိတ်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေသော လူနာ များအဖို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့် ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေနိုင်မည်လည်း ဟု သိလိုပါသလား ။ ဆန္ဒတွေ မစောပါနှင့် ၊ ပြောပြပါမည် ။ ဖေါက်သည်ချပါမည် ။ ယုံကြည်စွာ ကျင့်သုံးပါက အကျိုးထူးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာ ပြောလိုပါသည် ။ ကိုယ်တွေ့ ကြားရ မြင်ရ သည်များကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ် နှင့် ညီမငယ်တို့ ၂၀၁၀ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အမှတ် ၃၈၃ ၊ပထမထပ်၊ ကျိုက်ကဆံလမ်း ၊ (တာမွေ အခွန်လွတ်ဈေး အနီး )တွင် နေထိုင်သော ၊ မခွဲစိတ်ပဲ သည်းခြေကျောက် ပျောက်ကင်းသွားသော အငြိမ်းစား အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးသန်းဝင်း ထံ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ အကူအညီ တောင်းပြီး ၊ သိရှိရသော အောက်ပါ အချက်အလက်များ အား လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်ပါသည် ။ ဦင်္းသန်းဝင်း ပေးဝေ လိုက်သော လက်ကမ်းစာရွက် မှာ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ရှိပြီး သဲကွဲစေရန် ထပ်ဆင့် ပြန်လည် ရေးသားပြလိုက်ပါသည် ။
သည်းခြေအိတ်ကျောက်တည်ရောဂါပျောက်ဆေးနည်း အခမဲ့ပေးသည် ။ ဦးသန်းဝင်း ဖုန်း ၀၉၅၀၇၀၁၅၇ ။
ဤစာတမ်းကို ယခင်က သင်လက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည် ။ ဤ ဆေးနည်းသည် အမှန်တကယ် စွမ်းပါသည် ။ Dr . Lai Chiu-Nan ၏ အကြောင်းနှင့် ဤဆေးနည်းဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းသူများ၏ ကိုယ်တွေ့ တင်ပြချက်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှုာနိုင်ပါသည် ။ “ ကောင်းသောအရာများကို အမြဲလက်ဆင့်ကမ်းပါ ” ။
သဘာဝနည်းဖြင့် သည်းခြေကျောက်ကို ဖယ်ရှားနည်း ။
(Dr . Lai Chiu-Nan နည်းပေးသည် )
ဤဆေးနည်းဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းသူ များပါသည် ။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲ၍ ပျောက်ကင်းလျှင်လည်း ဤဆေးနည်း ကို အခြားသူများသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ ။
Dr . Lai Chiu-Nan သည် ဤဆေးနည်းကို အခမဲ့ မျှဝေသည်ဖြစ်ရာ သင်သည်လည်း လူအများကို အခမဲ့ မျှဝေပါ ။တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်ထံမှတဆင့်ကြားပြီး ဤဆေးနည်းကြောင့် ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့ခြင်းပင်လျှင် သင်ရရှိသောဆုလာဘ်ဟုမှတ်ယူပါ ။
သည်းခြေကျောက်သည် လူတိုင်း၏စိုးရိမ်သည့်အချက်တော့မဟုတ်ပါ ။သို့ ရာတွင် လူတိုင်းတွင်ရှိသည့်အရာဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် စိုးရိမ်သင့်ပေသည် ။ ထို့ အပြင် သည်းခြေကျောက်သည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည် ။ Chiu-Nan က “ ကင်ဆာရောဂါဆိုသည်မှာ မည်သည့်အခါမျှ ရှေးဦးဆုံး ဖြစ်သောရောဂါ မဟုတ်ပါ ။” ဟုထောက်ပြခဲ့ပါသည် ။ “ အများအားဖြင့် ကင်ဆာဖြစ်စေသော အခြားပြသနာအများအပြားရှိပါသည် ။ တရုတ်ပြည်တွင် ကျွန်မ၏ သုတေသနပြုချက်အရ ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာသည်များသည် အများအား ကျောက်တည်သူများဖြစ်ကြကြောင်း မှတ်တမ်းများတွေ့ ရှိရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးတွင် သည်းခြေကျောက်များရှိပါသည် ။ အကြီး အသေးနှင့် အနည်းအများသာ ကွာခြားပါသည် ။
သည်းခြေကျောက်တည်သောရောဂါ၏ လက္ခဏာ တစ်ခုမှာ အစာကို များများစားပြီးနောက် ဝမ်းပိုက် ပြည့်အင့် ဖေါင်းကားလာသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အစာမကြေသကဲ့သို့ လည်း ခံစားရပါသည် ။ အကယ်၍ ရောဂါအခြေအနေဆိုးပါက အသည်းတဝှိုက်တွင် နာကျင်မှုကို ခံစားရပါမည် ” ဟုလည်း ပြောပြပါသည် ။
အကယ်၍ သင့်တွင် သည်တွင် သည်းခြေကျောက်တည်နေသည်ဟုထင်လျှင် သဘာဝနည်းဖြင့် သည်းခြေကျောက် ဖယ်ရှားနည်းကို Dr . Lai Chiu-Nan က အောက်ပါအတိုင်း နည်းပေးထားပါသည် ။
အသည်းနှင့် သည်းခြေကျောက်တို့ သည် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဆက်စပ်နေကြသည် ဖြစ်ရာ အောက်ပါကုသနည်း ( သို့ မဟုတ် ) ဆေးနည်းသည် အသည်းအားနည်းသူများ အတွက်လည်း သင့်လျှော်ပါသည် ။
စနစ်တကျ စားသောက်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကုသနည်း ( သို့ မဟုတ် ) ဆေးနည်း ။
၁ ။ ပထမ (၅) ရက်တွင် နေ့ စဉ် ပန်းသီးဖျော်ရည် (Apple Juice ) ၄ ခွက် သောက်ပါ ။ ( သို့ မဟုတ် ) ပန်းသီး လေး၊ ငါး လုံး စားပါ ။ ( ပန်းသီး ဖျော်ရည် သို့ မဟုတ် ပန်းသီး မိမိ နှစ်သက်ရာ စားသောက်နိုင်သည်) ။ ပန်းသီးရည်သည် သည်းခြေကျောက်များကို ပျော့စေနိုင်ပါသည် ။ ထို ၅ ရက် အတွင်း အစားအစာကို ပုံမှန် စားသုံးပါ ။
၂ ။ ၆ ရက် မြောက်သောနေ့ တွင် ညစာ မစားဘဲ နေပါ ။
၃ ။ ထိုနေ့ ည ၆ နာရီတွင် ဆားခါး ( Epsom salt ) (MgSO4 ) တစ်ဇွန်းကို ရေ နွေးနွေး တစ်ဖန်ခွက်နှင့် သောက်ပါ ။
၄။ ည ၈ နာရီတွင် အထက်ပါအတိုင်း ဆားခါး တစ်ဇွန်း ထပ်သောက်ပါ ။
ဆားခါးသည် သည်းခြေအိတ် ပြွန်များကို ပွင့်စေပါသည် ။
၅။ ည ၁၀ နုာရီတွင် သံလွင်ဆီ ( သို့ မဟုတ် ) နှမ်းဆီ ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် ကို လတ်ဆတ်သော သံပုရာရည် ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် နှင့် သောက်ပါ ။ အဆိုပါ နှစ်မျိုးကို သေချာစွာ ရော မွှေပြီးမှ သောက်ပါ ။ ဆီသည် သည်းခြေကျောက်များကို ချောမွေ့ စွာ ထွက်စေနိူင်ပါသည် ။
( မှတ်ချက် ။ ။ ပန်းကန် တစ်လုံးစာ = ၂၅၀ မီလီ လီတာ ။
သံပုရာရည် ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် = သံပုရာသီး ၁၀ လုံး ခန့်)
နောက် တစ်နေ့ဝမ်းသွားသောအခါ ဝမ်းထဲတွင် အစိမ်းရောင် ကျောက်တုံးများကို တွေ့ ရပါမည် ။ Dr . Lai Chiu-Nan က “ များသောအားဖြင့် ကျောက်တွေက မစင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် ။ရေတွက်ကြည့်ချင်ရင်လည်းရပါတယ် ။ ကျောက်တုံး ၄၀ - ၅၀ ကနေ ၁၀၀ လောက် အထိ ကျတဲ့လူတွေလည်း တွေ့ ဖူးပါတယ် ။ တကယ်များတာပါ ” ဟု မှတ်ချက်ချပါသည် ။
ဤ ဆေးနည်းကိုအခြားသူများသို့လက်ဆင့်ကမ်း၍ အခမဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ ။
(ဤဆေးနည်းကို ဦးသန်းဝင်း က အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားပါသည် ။)
ဦးသန်းဝင်း ဆိုသူမှာ အငြိမ်းစား အင်ဂျင်နီယာကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည် ။ သူ၏ ဇနီးမှာလည်း အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံး ဖေါ်ရွေကြသည်။ဘုရား တရားကြည်ညိုကြသည် ။ သူကိုယ်တိုင် သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း ဝေဒနာကို နာကျင်စွာ ခံစားခဲ့ရပြီး ဆရာဝန်များဖြင့် ပြသရာ ခွဲစိတ်ကုသဖို့ပြောသဖြင့် ၂၀၁၀ ဇွန်လ ဆန်းတွင် ခွဲစိတ်ရန် ရက်ချိန်းယူထားပြီး ဖြစ်ရာ မှ သူ၏ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးက အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေ တွေ့ ရှိသော အထက်ပါ ဆေးနည်းအား ကူးယူ ပြသ သဖြင့် ၊ ထိုနည်းအတိုင်း စားသုံးခဲ့ရာ၊ မခွဲ မစိတ် မနာမကျင်ပဲ ၊ တပါတ်ခန့် သာ ကြာမြင့်သော အချိန်ဖြင့် သည်းခြေကျောက်များ ပျောက်ကင်းခဲ့ရပါသည် ။ သို့ ဖြစ်၍ သူ့ လို ခံစားနေကြရသော ဝေဒနာသည် လူအများ တွင် ဤရောဂါမှ ပျောက်ကင်းစေလိုသော စေတနာ မေတ္တာ တို့ ဖြင့် ၊ အခကြေးငွေ လုံးဝ ( လုံးဝ ) မယူပဲ ၊ သူ့ကိုယ်ပိုင် အချိန် ၊ကာယ၊ ဥာဏအားနှင့် ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ကာ ဤဆေး အညွှန်း ၊ နည်းလမ်း ၊ သောက်သုံးပုံ အသေးစိတ်ကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် ဖြင့် ရှင်းလင်း ပြောကြား ပေး နေပါသည် ။သူ့ ထံသို့လူကိုယ်တိုင် သွားရောက် မေးကြားလိုပါက ဖုန်းဖြင့် တစ်ရက် ကြိုတင် ရက်ချိန်းယူနိုင်ပါသည် ။တခြားအချိန်တွင် ဆက်သွယ်သူများလွန်လှ၍ သူ့ ဖုန်းကို ပိတ်ထားတတ်သဖြင့် နေ့ လည်ပိုင်း ကျော်လွန်ပြီးမှ ဆက်ပါ ။
အကြံပေးချက် ။ ။
ပန်းသီးဝယ်ယူရာတွင် အလုံးကြီး အခွံနီ က ပိုကောင်းသည် ။ တရုပ်ပြည်မှ ဝင်သည် ။ရန်ကုန်တွင် နေသူများ အတွက် သီရိမင်္ဂလာ ဈေး ၊ ဒိုင်တွင် ဝယ်ပါက စီးတီးမတ် ထက် တစ်ဝက်မျှ သက်သာသည် ။ တစ်နေ့၅ လုံး ဆိုတော့ ၅ရက်စာ ၂၅ လုံး ၊ အခွံမခွာပဲ ဝါးစားနိုင်ပါက ပိုကောင်းသည် ။ အများကြီး စားရမည် ဖြစ်သဖြင့် တစ်ချို့ သူများ ပါးစပ်နာ နိူင်သည်။ ပွန်းပဲ့ နိုင်သည် ။ အစိတ်သေးသေး အတုံးသေးသေးလေးများ စိတ်ပြီး မနက် ၂ လုံး ၊ နေ့ လည် ၂ လုံး ၊ ည ၁လုံး တမြုံ့ မြုံ့ဝါးစားပါ ၊ လုံးဝ မဝါးနိူင်တော့ပါက သစ်သီးဖျော်စက် ဖြင့် ကြိတ်ပြီး စားပါ ။ သံဓါတ်များသော သစ်သီး ဖြစ်သဖြင့် အရောင်အဆင်းတော့ မလှမပ ဖြစ်နေမည် ၊ဝမ်းလည်းချုပ်စေတတ်သည် ။ ရောဂါပျောက်ရန် ကြိုးစားပြီး စားပေးပါ ။ သံလွင်ဆီမှာ ဝယ်ရမလွယ် ( သို့မဟုတ် ) ဈေးပိုကြီးတတ်သဖြင့် နှမ်းဆီ ကို သုံးပါ ။ အာနိသင်ခြင်းတူတူပင်ဖြစ်သည် ။
ဝမ်းမခိုင်သော ညီမငယ်လေးတယောက်လည်း ထိုနည်းအတိုင်း လိုက်နာ စားသုံးခဲ့ရာမှ ဆားခါးနှင့် နှမ်းဆီ ၊ သံပုရာရည် များ မသောက်ရသေးမီ (၅ ) ရက်မြောက် နေ့ တွင်စတင်၍ ဝမ်းထဲမှတဆင့် သည်းခြေကျောက်များ ထွက်ကျပြီး ၊ နောက် တစ်ရက် ဆားခါး ၊ နှမ်းဆီ ၊ သံပုရာရည် အစွမ်းကြောင့် ဆက်လက် ဝမ်းလျှော သည် ။ ယခုအခါတွင် သည်းခြေ ကျောက် နှိပ်စက်မှုကြောင့် နာကျင်မှု များ ကင်းဝေးကာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည် ။( သူ့ ဓါတ်ပုံများကို တင်ပြလိုသော်လည်း ခွင့်ပြုချက် မရသဖြင့် အဆိုပါ ကျောက်တုံး မျိုး ဆင်တူများ ၊ ပုံများ ကို အင်တာ နက်တွင် ရှာဖွေ ပြီး ကူးယူ ဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည် )
အလားတူ ဝေဒနာ ခံစားနေကြရသူများလည်း မခွဲမစိတ်ရပဲ သည်းခြေကျောက် ရောဂါမှ ပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ ။ ကျောက်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ ကျောက်စရာ မလိုတော့တဲ့ ဒီကျောက်တုံးများကြောင့် သည်းခြေအိတ် ဖယ်ထုတ်ခံရပြီး အမှတ်သည်းခြေ မရှိသူများ အဖြစ်မှ လွတ်ကင်းကြပါစေ ဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည် ။
:Khyl : at 9/08/2010 04:42:00 PM
မိုးစက်ပွင့် said... | Wednesday, September 08, 2010 5:09:00 PM
ကျေးဇူးပဲ ...ကိကိရေ။ တို့ ယောင်းမကတော့ မနှစ်က ခွဲလိုက်တာ အထဲမှာ ကျောက်သေးသေးလေးတွေ ၄၂ လုံးတောင် ရသတဲ့။ မခွဲရသေးသူများအတွက် ဆက်ဖြန့်လိုက်ဦးမယ်..
An Asian Tour Operator said... | Wednesday, September 08, 2010 5:42:00 PM
ကျောက် က ကြောက်စရာ ကြီးပါ့လား။
TYZ said... | Wednesday, September 08, 2010 6:20:00 PM
မမကိရေ ဒါလေးကူးပြီး အီးမေးလ်ကနေ ဖြန့်လိုက်တော့မယ်နော်။ မျှဝေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Wednesday, September 08, 2010 6:47:00 PM
မယ်ကိရေ..လူတိုင်းသိသင့်တယ်...forward mail တော့လျောက်ပို့မှ
rose of sharon said... | Thursday, September 09, 2010 11:26:00 AM
အဲဒီတစ်ယောက်က "ငယ်" မှဟုတ်ရဲ့လား ? သတိရနေတယ်ကိရေ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Thursday, September 09, 2010 12:28:00 PM
အဲလေ .. အရေးထဲ ကြော်ငြာက ၀င်နေပြန်ပြီ
ကျေးဇူးမကီရယ် ဒီပိုစ့်လေးက အတော်ကို အသုံးတည့်မှာ
ညီမတို့ အမျိုးတွေထဲမှာလည်း ကျောက်တည်တဲ့သူများတယ်
အမေနဲ့ ညီမလေးတောင် တစ်လခြားစီလောက် ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်လိုက်ရတယ်
ဒီနည်းသာ စောစာက သိရင်ပိုက်ဆံ များကြီး မကုန်တော့ဘူးနော်.. သူတို့ကို ပန်းသီးတွေချည်း ၀ယ်ကျွေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ
Anonymous said... | Thursday, September 09, 2010 1:01:00 PM
လူလည်းမနာကျင် ပိုက်ပိုက်လည်း မကုန်တဲ့နည်း
အများသိအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ် မကိလည်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
ဆောင်း said... | Thursday, September 09, 2010 1:31:00 PM
သည်းခြေထုတ်လိုက်ရရင် ခုခံနိုင် စွမ်းအားကျတယ် မဟုတ်လား။ အသည်းရောဂါလည်း ဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်ဆို။ အစာလည်း မကြေလွယ်ဘဲ မစားချင် မသောက်ချင် ဖြစ်တယ်ဆို။ သည်းခြေအိတ်ထုတ်ထားပြီးလည်း ဒီလို အောင့်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်
kiki said... | Thursday, September 09, 2010 4:06:00 PM
ဆောင်း<----သည်းခြေရည်က အစာခြေ၊အဆီဓါတ်တွေ ခြေဖျက်ပေးတာပါ ။ အဲ့ဒီသည်းခြေရည်ကို အသည်းက ထုတ်လုပ်ပြီး သည်းခြေအိတ်ထဲ မှာ သိုလှောင်ထားတာပါ ။ဂိုဒေါင်သဘော ပါပဲ ။ အဆီတွေ ပါတဲ့ အစာ စားရင် သူ့ ကို ခြေဖျက်ဖို့့သည်းခြေဓါတ် ကို ပို လိုအပ်ပါတယ် ။သည်းခြေအိတ် ဖြတ်ထုတ်ပြီးပေမဲ့ အသည်းကနေ သည်းခြေရည် ဆက်ထွက် နေလို့ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဆီဓါတ်များများပါတဲ့ အစာ တွေ စား နေရင် အသည်းက လုံလောက်တဲ့ သည်းခြေရည် ပမာဏကို တချိန်ထဲ မထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အစာ မကြေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ သည်းခြေထုတ်ထားပြီး အောင့် တယ် ဆိုတာ ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် ( ဥပမာ. အစာအိမ် ၊အသည်း ။ သည်းခြေပြွန် ၊ မုန့်ချို အိတ် ) လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အသည်း ထဲက ပြွန်ငယ်လေးတွေ မှာ လဲ ကျောက်တုံး သေးသေးအမှုန်လေး. တွေ ရှိ နေနိုင်ပါတယ် ။ဒီတော့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ နဲ့ ဆက်လက် ပြသပြီး ရောဂါရှာဖွေ ကုသ သင့်ပါတယ် ။
kiki said... | Thursday, September 09, 2010 4:16:00 PM
ဆောင်း.. <--- မေးထားတဲ့ ၊ ကျန်နေတဲ့ အချက်တွေ ပြောဖို့ မေ့သွားပါတယ် ။။ သည်းခြေ နဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာ ခုခံစွမ်းအား က မသက်ဆိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်သည်းခြေအိတ် ဖြတ်ထုတ်ပြီးရင် ခုခံအားကျတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘုး ။ အသည်းရောဂါ ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ် ဆိုတာ လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ နဂိုတည်းက အသည်းမကောင်းသူများ အနေနဲ့ နဂို အခံကြောင့်ပဲ အသည်း ရောဂါဆက်ဖြစ်တာပါ ။ အစားအသောက် ..ဥပမာ .အဆီဓါတ်များ နဲ့တော့ ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် ။ ကင်ဆာ ရောဂါသည်များမှာ လည်း သည်းခြေကျောက်တည်တာတွေ တွေ့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သည်းခြေကျောက်ကနေ ကင်ဆာ ဖြစ်သွားတာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
အဖြူရောင်နတ်သမီး said... | Thursday, September 09, 2010 8:38:00 PM
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Thursday, September 09, 2010 11:29:00 PM
ကျွန်တော်လဲ မှတ်ထားတယ် ကြုံတဲ့အခါကျောက်တည်တဲ့ သူတွေကို ပြန်မျှဝေလို့ရတာပေါ့။ အကျိုးများစေတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ခြင် said... | Friday, September 10, 2010 3:08:00 AM
ကိရေ ဖောဝက်လိုက်ပြီ သူငယ်ချင်း... အရမ်း ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပို့လေးပါပဲ....
အိ့ဗြိ့ said... | Friday, September 10, 2010 3:42:00 AM
အစ်မပို့စ်မှပဲ ပန်းသီးအရွယ်အစားကိုသေချာတွေ့ရတော့တယ် အနမ်းတို့ပိုစ့်များ ပန်းသီးဆိုတော့ အမျိုးမျိုးရှိတာပဲ အသေးလား အကြီးလား အလတ်လား စဉ်းစားလိုက်ရတာ ဟူး ခုမှပဲ ရှင်းတော့တယ် ...ကျန်သူတွေကိုမျှဝေလိုက်ဦးမယ်နော်
thawzin said... | Friday, September 10, 2010 4:31:00 PM
အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အဲလိုရောဂါဖြစ်သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ မှတ်သားထားပါ့မယ်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ လမ်းညွှန်နိုင်တာပေါ့။
Anonymous said... | Monday, September 20, 2010 2:52:00 AM
မကိကိရေ...မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေရောကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီနည်းကိုသုံးလို့ ရလားအမ။ပြီးတော့ဆေးခါးဆိုတာကြီးကအလွယ်တကူဝယ်လို့ ရလားအမ Epsom salt ဆိုပြီးဆေးခန်းတွေမှာရောင်းလားအမ...ပြီးတော့နံလား..ခါးလား...ညီမကဆေးကြောက်လို့ ကြိုမေးတာနော်...စိတ်မဆိုးနဲ့ နော်
ချစ်ကြည်အေး said... | Wednesday, September 22, 2010 10:05:00 AM
အမက အသက် ၂၅ထဲက သည်းခြေကျောက် တည်တာ ကိရဲ့၊ သိမှ မသိပဲနော်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကပဲ သည်းခြေထုတ်လိုက်ရပါရောလား၊ ကီးဟိုးလ်ဆာဂျရီ ဆိုလား ဒေါင့်ဖြတ် အပေါက်သေးသေး ၃ပေါက်ရယ်၊ ချက်မှာ တပေါက်ရယ် ဖောက်ပြီးထုတ်တာ။ ဆေးပညာတိုးတက်မှုကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ကိရယ်...
Anonymous said... | Tuesday, October 05, 2010 3:23:00 AM
မကိကိရေ..epsom salt ကိုရှာလိုလွယ်မယ်ထင်ပြီ ပန်းသီတွေစွတ်စားတာ..၅ရက်မြောက်နေ့ မှာသွားရှာတာမရဘူးဗျာ...ဆေးဆိုင်၅ဆိုင်တောင်ရှာလိုက်တာ..လက်လျော့လိုက်ပြီ...ပြည်တော်ပြန်မှပဲရှာပြီးကစ်တော့မယ်
kiki said... | Tuesday, October 05, 2010 7:29:00 PM
ဂျူလိုင်ဖြူ .... Epson salt ဆိုတာ ဆားခါး ပါ ပဲ လေ.. ဒီ မှာ တော့ ၀ယ်ရ လွယ်တယ်. ဈေး လဲ ပေါပါတယ် .. အထုတ်ကြီး တထုတ် မှ ၈၀၀ ကျပ် ပဲ ပေးရ တယ်.. ကယ်ဒီ ဂလူးကို့ စ် လို အထုတ် မျိ်ုးလေ ..စက္ကူ ထုတ် ပဲ .. ဘီပီအိုင် ( ခုတော့ ဘာနာ မယ် လဲ မသိ) က ထုတ်တာလေ..
Anonymous said... | Thursday, October 28, 2010 10:25:00 AM
Unknown said... | Tuesday, March 22, 2011 2:52:00 PM
သောက်မယ့် လူနာက အစာအိမ် ယောင် ယောင်နေတတ်ပါတယ်...အဲ့ဒါဆိုရင်ရော သောက်လို့ရပါသလား...
kiki said... | Wednesday, March 30, 2011 1:03:00 PM
wattkalay-- သို့( ခုမှ တွေ့ မိလို့စာပြန်တာ နောက်ကျသွားတာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ၊ )
သည်းခြေကျောက်ကြောင့် ဗိုက်အောင့် တာလား၊ အစာအိမ်ကြောင့်ဗိုက်အောင့်တာ လား ဆိုတာ အရင်ဆုံး ခွဲခြား သိဖို့လိုပါ တယ်။
အစာအိမ်ယောင်တယ်၊ ဗိုက်အောင့်တာ အစာအိမ်ကြောင့်သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ လောလောဆယ်မှာ ဒီနည်းနဲ့ကျောက်ချဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အုံး၊ ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ ပန်းသီးချည်းအစားများရင် အစာမကြေ ဖြစ်တတ်ပြီး နောက်ရက်တွေမှာ လည်း ဝမ်း နှုတ် ရ အုံးမယ် ဆိုတော့ ပိုဆိုးမှာ စိုးလို့ပါ ။
Anonymous said... | Monday, August 08, 2011 7:56:00 AM
ကျေးဇူးပါ။ ဆရာဝန်ကတော့ ultrasound screening လုပ်ခိုင်းထားတယ်။gallstones သေချာရင်တော့ ဒီနည်းပဲသုံးပါမယ်။
Anonymous said... | Monday, July 14, 2014 2:27:00 PM
အဲလို နည်းနဲ့  သည်းခြေကျောက်
jittoo said... | Thursday, June 11, 2020 8:21:00 AM